Tonizia: 2011 An-tsary Amin’ny Valantserasera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Janoary 2012 14:00 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, Français, বাংলা, Español, عربي, Swahili, Ελληνικά, English
Nanapa-kevitra ny hanadino ny lasa rehetra ny Toniziana, ary tsy nitsahatra ny tolona ho amin'ny demokrasia raha tsy nitsoaka tao amin'ny firenena i Ben Ali. Kianjan'i Kasbah, toerana misy ny minisitera, nanjary ivon-toerana fanaovana fihetsiketsehana sy sit-in, nampiasaina ho fandrodànana ny fitondrana teo aloha izay nankahalaina tanteraka (izay efa nihongana ankehitriny), ny RCD (amin'ny fanalavana azy amin'ny teny frantsay hoe Le Rassemblement Constitutionnel Démocratique, Fivondronann'ny mpiaro ny lalampanorenana Demokratika), izay voarohirohy tamin'ny resaka kolikoly sy ny fanararaotana (tsindry hazo lena).
Tamin'ny 23 Oktobra 2011, no kihon-dalana ho an'i Tonizia. Niandry ora maro ireo mpifidy handatsa-bato, nandritra ny fifidianana malalaka sy madio voalohany tamin'ilay antsoina hoe Lohataona Arabo.
Tamin'ny 22 Desambra, nifidy ilay mpiaro ny zon'olombelona, Moncef Marzouki ny Antenimieran-dalampanorenana, efa nogadraina izy io, ary nalefa sesintany nandritra ny fitondran'i Ben Ali, toy ny filohan'ny Repoblika Toniziana vaovao.
Satria mifarana ny taona, mbola mitohy hatrany ny hetsika sy ny sit-in ho amin'ny demokrasia, ny asa, ary ny hambompo-pirenena ao Tonizia, toy ny adihevitra mafana mikasika ny Antenimieran-dalampanorenana, sy ny governemanta vonjimaika tarihin'i Hamadi Jebali (avy amin'ny antoko Ennahdha) mandray ny asany.